တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည် ---
“တာဝန်”ဆိုတာ “မလွှဲမသွေ လုပ်ဆောင်ရမည့်အမှုကိစ္စ”ဖြစ်သည်။
တာဝန်တခု မိမိအပေါ် လုပ်ဆောင်ရန် ကျရောက်လာပြီဆိုလျှင် လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်၊ မျက်မှောက်ခေတ်၌ လူ့အသင်းအဖွဲ့မှာဖြစ်စေ, ရဟန်းတော် အသင်းအဖွဲ့မှာဖြစ်စေ မိမိတို့အနေနဲ့ ကျရာတာဝန်ကို မဆောင်ရွက်နိုင်ကြဘူးဆိုလျှင် ထိုအသင်းအဖွဲ့ဟာ ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်ဘူး၊ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးဖို့သာဖြစ်မည်။ မိမိကျရာတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာတွင် သူတပါး၏တာဝန်အပေါ် စွက်ဖက်တာ နှောင့်ယှက်တာ မဖြစ်စေပဲ ကူညီမှု ပံ့ပိုးမှုသာ ဖြစ်သင့်သည်။
ခရမ်းမြို့ သပြေကုန်း မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးသုမန၏သြဝါဒ အသင်းအဖွဲ့ပျက်ကြောင်း ၃-ပါး
ဖိတ်ခေါ်မလာ၊ ဘေးမှာ ပြစ်ပြော၊
ဤသုံးသွယ်၊ မှတ်ဖွယ် သင်းပျက်ကြောင်း။
(၁) အစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်သောအခါ မတက်ရောက်ခြင်း၊
(၂) ပြင်ပမျက်ကွယ်၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြစ်ပြောခြင်း၊
(၃) ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းများ ချောမွေ့ပြေပြစ်မှု မရှိခြင်း။
(၁) ဗဟုနေတ္တာရ- နည်းညွှန်လမ်းပြ အကြီးအမှူးလုပ်လိုသူ ပေါများခြင်း၊ (လူကြီးလုပ်ချင်သူ ပေါများခြင်း)၊
(၂) သဗ္ဗပဏ္ဍိတမာနီ- မိမိကိုယ်ကို ပညာရှိဟု ဘဝင်မြင့်သူ များခြင်း၊
(၃) ဗဟုမဟိစ္ဆာ- ရာထူးမက်မောသူ များခြင်း။
(၁) ရှေ့ဆောင်ကြီးသူ၊ လုပ်လိုသူ၊ များမူ သင်းပျက်တတ်၊
(၂) ဘဝင်မြင့်ဘိ၊ ပညာရှိဟု၊ ထင်သည့်သူတွေ၊ များပြားပေ၊ မှတ်လေ သင်းပျက်တတ်၊
(၃) ရာထူးမက်မော၊ သူတွေပေါ၊ ထိုရော သင်းပျက်တတ်။
.ကောင်းတာပြောပြု ကောင်းသောမှု ပြုစုတတ်ကြစေ. PDF File link
(၁) နာနာဘာဝ=ရှင်ကွဲ ကွဲခြင်း။
(၂) ဝိနာဘာဝ=သေကွဲ ကွဲခြင်း။
(၃) အညထာဘာဝ=ဘဝခြား၍ ကွဲခြင်း။
နာနာဘာဝေါတိ သရီရေန နာနာဒေသဘာဝေါ၊ ဝိပ္ပဝါသောတိ အတ္ထော။
ဝိနာဘာဝေါတိ မရဏေန ဝိယုဇ္ဇနံ။
အညထာဘာဝေါတိ ဘဝန္တရူပဂမနေန အညာကာရပ္ပတ္တိ။ (ဝိမတိ၊ ၂၊ ၂၆၆။)
နာနာဘာဝေါတိ ဇာတိယာ နာနာဘာဝေါ၊ ဇာတိအနုရူပဂမနေန ဝိသုံဘာဝေါ၊ အသမ္ဗဒ္ဓဘာဝေါတိ အတ္ထော။
ဝိနာဘာဝေါတိ မရဏေန ဝိနာဘာဝေါ၊ စုတိယာ တေနတ္တဘာဝေန အပုနပဝတ္တနတော ဝိပ္ပယောဂေါတိ အတ္ထော။
အညထာဘာဝေါတိ ဘဝေန အညထာဘာဝေါ၊ ဘဝန္တရဂ္ဂဟဏေန “ကာမာဝစရသတ္တော ရူပါဝစရော ဟောတီ”တိ အာဒိနာ တတ္ထာပိ “မနုေဿာ ဒေဝေါ ဟောတီ” တိ အာဒိနာ စ ပုရိမာကာရတော အညာကာရတာတိ အတ္ထော။ (သာရတ္ထ၊ ၃၊ ၄၄၇-၄၄၈။)
နာနာဘာဝေါတိ- ဟူသည်ကား၊ သရီရေန- ကိုယ်ဖြင့်၊ နာနာဒေသဘာဝေါ- အထူးထူးသောအရပ်သို့ သွားခြင်းတည်း၊ ဝိပ္ပဝါသော- ကွေကွင်းခြင်းတည်း။ ဣတိ အတ္ထော- ဤကားအနက်။ ဝိနာဘာဝေါတိ- ဟူသည်ကား၊ မရဏေန- သေသဖြင့်၊ ဝိယုဇ္ဇနံ- ကွေကွင်းခြင်းတည်း။
အညထာဘာဝေါတိ- ဟူသည်ကား၊ ဘဝန္တရူပဂမနေန-ဘဝတပါးသို့ ရောက်သဖြင့်၊ အညာကာရပ္ပတ္တိ-တပါးသော အခြင်းအရာဖြင့် ဖြစ်ခြင်းတည်း။ (ဝိမတိ၊ ၂၊ ၂၆၆။)
နာနာဘာဝေါတိ-ကား၊ ဇာတိယာ-ဇာတ်အားဖြင့်၊ နာနာဘာဝေါ-အသီးဖြစ်ခြင်း၊ ဇာတိအနုရူပဂမနေန-ဇာတ်အားလျော်သည်သို့ရောက်ခြင်းဖြင့်၊ ဝိသုံဘာဝေါ- အသီးအခြားဖြစ်ခြင်း၊ အသမ္ဗဒ္ဓဘာဝေါ-မဖွဲ့ မစပ်အပ်သည်၏အဖြစ်၊ ဣတိ အတ္ထော-ဤကားအနက်။
ဝိနာဘာဝေါတိ-ကား၊ မရဏေန-သေခြင်းဖြင့်၊ ဝိနာဘာဝေါ-ကင်း၍ဖြစ်ခြင်း၊ (ကွေကွင်းရခြင်း၊) စုတိယာ-စုတိအားဖြင့်၊ တေနတ္တဘာဝေန-ထိုအတ္တဘောအားဖြင့်၊ အပုနပဝတ္တနတော-တဖန်မဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ဝိပ္ပယောဂေါ-ကင်းခြင်းတည်း၊ ဣတိ အတ္ထော-ဤကားအနက်။
အညထာဘာဝေါတိ-ကား၊ ဘဝေန-ဘဝအားဖြင့်၊ အညထာဘာဝေါ-တပါးသောအခြင်းအရာ အားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း၊ ဘဝန္တရဂ္ဂဟဏေန-ဘဝတပါးကို ယူခြင်းဖြင့်၊ “ကာမာဝစရသတ္တော-ကာမာဝစရသတ္တဝါသည်၊ ရူပါဝစရော-ရူပါဝစရသတ္တဝါသည်၊ ဟောတိ-ဖြစ်၏၊”ဣတိ အာဒိနာ-ဤသို့အစရှိသဖြင့်လည်းကောင်း၊ တတ္ထာပိ-ထိုစကားရပ်၌လည်း၊ “မနုေဿာ-လူသည်၊ ဒေဝေါ-နတ်သည်၊ ဟောတိ-၏၊”ဣတိ အာဒိနာ စ-ဤသို့အစရှိသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုရိမာကာရတော-ရှေ့၌ဖြစ်သောအခြင်းအရာမှ၊ အညာကာရတာ-အခြားတပါးသောအခြင်း အရာ၏အဖြစ်တည်း၊ ဣတိ အတ္ထော-ဤကားအနက်။ (သာရတ္ထ၊ ၃၊ ၄၄၇-၄၄၈။)
ကဆုန်လပြည့် ဆင်မင်းနေ့ဝယ် ဆိုသည်ရယ်---?
လလျှင် ကဆုန်၊ နယုန် ဝါဆို၊ ထိုအဆိုတို့၊
ဤလိုလများ၊ အမည်သား၍၊ ညွှန်ကြားဟောခဲ့ပါသလော?
မေး။ ။(ဂ) အရှင်ဘုရား, မြတ်စွာဘုရား ဖွားမြင်ခြင်း, ဘုရားဖြစ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဝင်တွင် ကဆုန်လ, ဝါဆိုလ စသည့် လအမည်နှင့် အသက်တော်တို့ကို ပြသထားပါသည်။ ဘုရားလက်ထက်တော်က ဒီလိုလအမည်နဲ့ အသက်တော်ကို ညွှန်ပြပြီး ဟောခဲ့ပါသလားဘုရား?
အိန္ဒိယမှီ၊ မြန်မာသည်၊ လမည်ပြုစုပါ
ဖြေ။ ။ (ဂ) အိန္ဒိယပက္ခဒိန်၌ နက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်ကို အခြေခံလျက် စန်း(လ)နှင့်ယှဉ်သော နက္ခတ်များ အစွဲပြု၍ လအမည်များကို ပေးခဲ့ကြပါသည်၊ ဥပမာ—စိတ္တ, စိတ္တမာသ (ပါဠိ), စိတြ, စဲတြ (ဟိန္ဒီ/သက္ကတ) = တန်ခူးလ (မြန်မာ)၊ ဝေသာခ, ဝေသာခမာသ (ပါဠိ), ဝဲရှာခ Vai'sakha (သက္ကတ) =ကဆုန်လ (မြန်မာ)၊ ဇေဋ္ဌ, ဇေဋ္ဌမာသ (ပါဠိ), ဇျေရ်ှဌ JyaishÔha (သက္ကတ) = နယုန်လ (မြန်မာ)၊ အာသာဠှ, အာသာဠှိမာသ (ပါဠိ), အာရှာဎ ŒshÈÉha (သက္ကတ)= (ဝါဆိုလ (မြန်မာ)စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် ရေးသားကြပါသည်။
မြန်မာပက္ခဒိန်သည် အိန္ဒိယပက္ခဒိန်ကို မှီး၍ ရှေးပညာရှင်တို့ ထွင်ခဲ့ဟန်တူပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အိန္ဒိယ ပက္ခဒိန် လစဉ်သည့်အတိုင်း မြန်မာလများကိုလည်း စဉ်ထားပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား ဖွားမြင်ခြင်း, ဘုရားဖြစ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဝင်တွင် ကဆုန်လ, ဝါဆိုလစသည့် လအမည်နှင့် အသက်တော်တို့ကို ပြထားနိုင်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓမတ္တညူဖြစ်တော်မူကြသော အဋ္ဌကထာဆရာများ၏ဖွင့်ဆိုချက်များကို ကြည့်၍ ညွှန်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဝံသအဋ္ဌကထာ နက္ခတ္တပရိစ္ဆေဒကထာ (၃၅၁)နှင့် ဒီဃနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ သမ္ဗဟုလပရစ္ဆေဒအဖွင့် (၁၈)၌—“ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဥတ္တရာသာဠှနက္ခတ်နှင့်စန်းယှဉ်သော ဝါဆိုလပြည့်နေ့၌ ပဋိသန္ဓေတည်နေတော်မူခြင်း, တောထွက်တော်မူခြင်း, ဓမ္မစကြာတရားတော်ကို ဟောတော်မူခြင်း, ရေမီးအစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာကို ပြတော်မူခြင်း၊ ဝိသာခနက္ခတ်နှင့်စန်းယှဉ်သော ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ဖွားတော်မူခြင်း, ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း, ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်း၊ မာဃနက္ခတ်နှင့်စန်းယှဉ်သော တပို့တွဲလပြည့်နေ့၌ ဘုရားရှင်၏ သာဝကသန္နိ ပါတ(သာဝကအစည်းအဝေး) ပြုတော်မူခြင်း, အာယုသင်္ခါရလွှတ်တော်မူခြင်း၊ အဿယုဇနက္ခတ်နှင့်စန်းယှဉ်သော သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်တော်မူခြင်း”တို့ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးအန္ဒိယ၊ နက္ခတ္တ၊ ဗေဒကျမ်းကိုသာ။
ပါဠိ သက္ကတ၊ သုံးစွဲကြ၊ လက အမည်မှာ။
မှီးငြမ်းပြုစု၊ မြန်မာမှု၊ ခေါ်ပြု ပက္ခဒိန်ပါ။
တစ်နှစ်တာမှ၊ ဆယ့်နှစ်လ၊ မည်က သီးသီးပါ။
မြန်မာ, အိန္ဒိယား၊ ဝေါဟာများ၊ ကွဲပြားကြရုံသာ။
လ၏အနေ၊ ထူးအထွေ၊ ကယ်လေ မရှိပါ။
သော ဧဝံ တာဟိ ဒေဝတာဟိ ကုသလံ သာရယမာနာဟိ ပရိဝုတော တတြ ဝိစရန္တောဝ စဝိတွာ မဟာမာယာယ ဒေဝိယာ ကုစ္ဆိသ္မိံ ဥတ္တရာသာဠှနက္ခတ္တေန ပဋိသန္ဓိံ ဂဏှိ။ (ဗုဒ္ဓဝံသအဋ္ဌကထာ၊ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဝံသဝဏ္ဏနာ၊ ၃၁၉။)
အာသာဠှိပုဏ္ဏမာယံ သကျရာဇကုလေ မဟာမာယာယ ဒေဝိယာ ကုစ္ဆိယံ ပဋိသန္ဓိံ ဂဟေတွာ ဒသ မာသေ ဒေဝမနုေဿဟိ မဟတာ ပရိဝါရေန ပရိဟရိယမာနော ဝိသာခပုဏ္ဏမာယံ ပစ္စူသသမယေ အဘိဇာတိံ ပါပုဏိ။ (ဣတိဝုတ္တက၊ ဋ္ဌ၊ ၁၂၈။)
မဟာမာယာပိ ဒေဝီ ဒသမာသေ ကုစ္ဆိနာ ဗောဓိသတ္တံ ပရိဟရိတွာ ပရိပုဏ္ဏဂဗ္ဘာ။ ပ ။ သာလသာခံ ဂဟေတွာ တိဋ္ဌမာနာယ ဧဝ တဿာ ဂဗ္ဘဝုဋ္ဌာနံ အဟောသိ။ ပ ။ ဗောဓိသတ္တော ပန ဒွေ ဟတ္ထေ ဒွေ ပါဒေ ပသာရေတွာ ဌိတကောဝ မာတုကုစ္ဆိသမ္ဘဝေန ကေနစိ အသုစိနာ အမက္ခိတောဝ သုဒ္ဓေါ ဝိသဒေါ ။ ပ ။ ဝိရောစမာနော မာတုကုစ္ဆိတော နိက္ခမိ။ (ဗုဒ္ဓဝံသအဋ္ဌကထာ၊ ၃၂ဝ-၃၂၁။)
ဧကူနတိံသဝဿာနိ၊ အဂါရံ အဇ္ဈဟံ ဝသိံ။ (ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ၊ ဂေါတမဗုဒ္ဓဝံသ၊ ၃၈ဝ။)
နိမိတ္တေ စတုရော ဒိသွာ၊ အဿယာနေန နိက္ခမိ။
ဆဗ္ဗဿံ ပဓာနစာရံ၊ အစရိံ ဒုက္ကရံ အဟံ။
မဟာသတ္တော ဧကူနတ္တိံသဝဿကာလေ ဟတ္ထဂတံ စက္ကဝတ္တိရဇ္ဇံ ခေဠပိဏ္ဍံ ဝိယ အနပေက္ခော ဆဍ္ဍေတွာ စက္ကဝတ္တိသိရိနိဝါသဘူတာ ရာဇဘဝနာ နိက္ခမိတွာ အာသာဠှိပုဏ္ဏမာယ ဥတ္တရာသာဠှနက္ခတ္တေ ဝတ္တမာနေ နဂရတော နိက္ခမိတွာ (ဗုဒ္ဓဝံသအဋ္ဌကထာ၊ ၃၃၁။)
အထ နံ ဆဗ္ဗဿာနိ မဟာပဓာနံ ပဒဟန္တံ ။ ပ ။ အယံ ဆဗ္ဗဿာနိ ဒုက္ကရကာရိကံ ကရောန္တောပိ။ ပ ။ မဟာပုရိသော ဝိသာခပုဏ္ဏမာယ ဥရုဝေလာယံ သေနာနိဂမေ။ ပ ။ တာယ သမ္ပသာဒနဇာတာယ ဒိန္နံ ပက္ခိတ္တဒိဗ္ဗောဇံ မဓုပါယာသံ ပရိဘုဉ္ဇိတွာ သုဝဏ္ဏပါတိံ ဂဟေတွာ နေရဉ္ဇရာယ ပဋိသောတံ ခိပိတွာ။ ပ ။ တရုဂဏာနံ ဝိရောစမာနဝိဇယတရုမဿတ္ထဗောဓိရုက္ခမူလမုပဂÑာ အဿတ္ထဒုမ ရာဇံ တိက္ခတ္တုံ ပဒက္ခိဏံ ကတွာ။ ပ ။ တိဏာနိ အဂ္ဂေ ဂဟေတွာ စာလေသိ။ တာဝဒေဝ စုဒ္ဒသဟတ္ထော ပလ္လင်္ကော အဟောသိ။ ပ ။ ဗောဓိသတ္တော တတ္ထ စုဒ္ဒသဟတ္ထေ တိဏသန္ထရေ တိသန္ဓိပလ္လင်္ကံ အာဘုဇိတွာ ။ ပ ။ နိသီဒိ။ ပ ။ အထ မဟာပုရိသောပိ ။ ပ ။ ပစ္စူသသမယေ သဗ္ဗဗုဒ္ဓါနံ အာစိဏ္ဏေ ပစ္စယာကာရေ ဉာဏံ သြတာရေတွာ အာနာပါနစတုတ္ထဇ္ဈာနံ နိဗ္ဗတ္တေတွာ တမေဝ ပါဒကံ ကတွာ ဝိပဿနံ ဝဍ္ဎေတွာ မဂ္ဂ ပဋိပါဋိယာ အဓိဂတေန စတုတ္ထမဂ္ဂေန သဗ္ဗကိလေသေ ခေပေတွာ သဗ္ဗဗုဒ္ဓဂုဏေ ပဋိဝိဇ္ဈိတွာ—။ (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၃၆, ၃၃၇, ၃၄ဝ။)
ဘဂဝါ ဟိ ဝိသာခပုဏ္ဏမာယ ရတ္တိယာ ပဌမယာမေ ပုဗ္ဗေနိဝါသံ အနုဿရိတွာ မဇ္ဈိမယာမေ ဒိဗ္ဗစက္ခုံ ဝိသောဓေတွာ ပစ္ဆိမယာမေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေ ဉာဏံ သြတာရေတွာ နာနာနယေဟိ တေဘူမက သင်္ခါရေ သမ္မသိတွာ “ဣဒါနိ အရုဏော ဥဂ္ဂမိဿတီ”တိ သမ္မာသမ္ဗောဓိံ ပါပုဏိ။ (ဥဒါန၊ ဋ္ဌ၊ ၄၆။)
သောဟံ စတ္တာရော နိမိတ္တေ ဒိသွာ အဿယာနေန မဟာဘိနိက္ခမနံ နိက္ခမိံ။ တတော ဆဗ္ဗဿာနိ ပဓာနံ ပဒဟိတွာ ဝိသာခပုဏ္ဏမာယ ဥရုဝေလာယံ သေနာနိဂမေ သေနာကုဋုမ္ဗိကဿ ဓီတာယ သမ္ပသာဒဇာတာယ သုဇာတာယ နာမ ဒိန္နံ မဓုပါယာသံ ပရိဘုဉ္ဇိတွာ သာလဝနေ ဒိဝါဝိဟာရံ ကတွာ သာယနသမယေ သောတ္ထိယေန နာမ တိဏဟာရကေန ဒိန္နယ အဋ္ဌ တိဏမုဋ္ဌိယော ဂဟေတွာ အဿတ္ထဗောဓိရုက္ခမူလံ ဥပဂÑာ တတ္ထ မာရဗလံ ဝိဒ္ဓံသေတွာ သမ္ဗောဓိံ ပတ္တောသ္မိ။ (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၄၇။)
ဘဂဝါ ။ ပ ။ ဥတ္တရာသာဠှနက္ခတ္တယောဂေ ဝတ္တမာနေ အဋ္ဌာရသဟိ ဗြဟ္မကောဋီဟိ ပရိဝုတော ပဉ္စဝဂ္ဂိယေ ထေရေ အာမန္တေတွာ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ္တန္တံ ဒေသေသိ။ (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၄၃။)
ဧကူနတိံသော ဝယသာ သုဘဒ္ဒ၊
ယံ ပဗ္ဗဇိံ ကိံ ကုသလာနုဧသီ။
ဝဿာနိ ပညာသ သမာဓိကာနိ၊ (မဟာဝဂ္ဂ၊ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တ၊ ၁၂၅။)
သဗ္ဗမ္ပေတံ အဘိသမ္ဗောဓိတော ယာဝ ပရိနိဗ္ဗာနာ ပဉ္စစတ္တာလီသဝဿာနိ ဘာသိတံ လပိတံ “တီဏိ ပိဋကာနိ ပဉ္စ နိကာယာ နဝင်္ဂါနိ စတုရာသီတိ ဓမ္မက္ခန္ဓသဟဿာနီ”တိ ဧဝံ မဟာပဘေဒံ ဟောတိ။ (မဟာဝဂ္ဂ၊ ဋ္ဌ၊ တထာဂတပစ္ဆိမဝါစာဝဏ္ဏနာ၊ ၁၈၃။)
ကုသိနာရာယံ ဥပဝတ္တနေ မလ္လရာဇူနံ သာလဝနေ ယမကသာလာနမန္တရေ ဝိသာခပုဏ္ဏမာယံ ပစ္စူသဝေလာယံ အနုပါဒိသေသာယ နိဗ္ဗာနဓာတုယာ ပရိနိဗ္ဗုတေ ဘဂဝတိ—။ (ဝိမာနဝတ္ထု၊ ဋ္ဌ၊ မလ္လိကာ ဝိမာနဝဏ္ဏနာ၊ ၁၅ဝ။)
ဆဗ္ဗဿာနိ မဟာပဓာနံ ပဒဟိတွာ ဝိသာခပုဏ္ဏမဒိဝသေ။ ပ ။ ပစ္ဆိမယာမာဝသာနေ။ ပ ။ သဗ္ဗညုတညာဏံ ပဋိဝိဇ္ဈိတွာ။ ပ ။ အာသာဠှိပုဏ္ဏမဒိဝသေ ။ ပ ။ ဓမ္မစက္ကံ ပဝတ္တေတွာ—။ (ဓမ္မပဒ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၅၄, ၅၅။)
မဟာပုရိသော ပန ဥတ္တရာသာဠှနက္ခတ္တေနေဝ မာတုကုစ္ဆိံ သြက္ကမိ၊ မဟာဘိနိက္ခမနံ နိက္ခမိ၊ ဓမ္မစက္ကံ ပဝတ္တေသိ၊ ယမကပါဋိဟာရယံ အကာသိ။ ဝိသာခနက္ခတ္တေန ဇာတော စ အဘိသမ္ဗုဒ္ဓေါ စ ပရိနိဗ္ဗုတော စ။ မာဃနက္ခတ္တေန တဿ သာဝကသန္နိပါတော စ အာယုသင်္ခါရဝေါသဇ္ဇနဉ္စ အဟောတိ။ အဿယုဇနက္ခတ္တေန ဒေဝေါရောဟဏံ။ (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ ဋ္ဌ၊ နက္ခတ္တပရိစ္ဆေဒကထာ၊ ၃၅၁။)
ဒီဃနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ မဟာပဒါနသုတ် သမ္ဗဟုလပရိစ္ဆေဒအဖွင့် (၁၈)၌လည်း အလားတူပင် လာရှိ၏။
သံဝေဂဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်ရန် ရှစ်တန် ဤတရား---
သံဝေဂဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်ရန် ရှစ်တန် ဤတရား
အဋ္ဌ မဟာသံဝေဂဝတ္ထူနိ နာမ ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိ မရဏံ စတ္တာရိ အပါယဒုက္ခာနီတိ၊ အထ ဝါ ဇာတိဇရာ ဗျာဓိမရဏာနိ စတ္တာရိ, အပါယဒုက္ခံ ပဉ္စမံ, အတီတေ ဝဋ္ဋမူလကံ ဒုက္ခံ, အနာဂတေ ဝဋ္ဋမူလကံ ဒုက္ခံ, ပစ္စုပ္ပန္နေ အာဟာရပရိယေဋ္ဌိမူလကံ ဒုက္ခ’န္တိ။
(ခုဒ္ဒကပါဌအဋ္ဌကထာ၊ မေတ္တသုတ်အဖွင့်၊ ၂ဝ၁။ သုတ္တနိပါတ်အဋ္ဌကထာ၊ ၁၊ ၁၇၇-၁၇၈။)
အဋ္ဌ မဟာသံဝေဂဝတ္ထူနိ နာမ- ရှစ်ပါးသော မဟာသံဝေဂဝတ္ထုတို့မည်သည်ကား၊ ဇာတိ- ပဋိသန္ဓေနေခြင်း လည်းကောင်း၊ ဇရာ- အိုခြင်းလည်းကောင်း၊ ဗျာဓိ- နာခြင်းလည်းကောင်း၊ မရဏံ- သေခြင်းလည်းကောင်း၊ စတ္တာရိ-လေးပါးကုန်သော၊ အပါယဒုက္ခာနိ- အပါယ်ဆင်းရဲတို့လည်းကောင်း၊ ဣတိ- ဤသို့၊ ဘဝန္တိ-ဖြစ်ကုန်၏။ အထ ဝါ- တနည်းသော်ကား၊ ဇာတိဇရာဗျာဓိမရဏာနိ-ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိ မရဏဟု ဆိုအပ်ကုန်သော၊ စတ္တာရိ-လေးပါးတို့ လည်းကောင်း၊ ပဉ္စမံ-ငါးခုမြောက်သော၊ အပါယဒုက္ခံ- အပါယ်ဆင်းရဲလည်းကောင်း၊ အတီတေ- အတိတ်ဘဝ၌၊ ဝဋ္ဋမူလကံ- ဝဋ်ဆင်းရဲ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သော၊ ဒုက္ခံ- ဆင်းရဲလည်းကောင်း၊ အနာဂတေ- အနာဂတ်ဘဝ၌၊ ဝဋ္ဋမူလကံ- ဝဋ်၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သော၊ ဒုက္ခံ-ဆင်းရဲလည်းကောင်း၊ ပစ္စုပ္ပန္နေ- ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌၊ အာဟာရပရိယေဋ္ဌိမူလကံ- အာဟာရကို ရှာမှီးခြင်းလျှင် အကြောင်းရင်းရှိသော၊ ဒုက္ခံ- ဆင်းရဲလည်းကောင်း၊ ဣတိ- သို့၊ (ဘဝန္တိ-ကုန်၏)။
သံဝေဂ ၈-ပါး။ ။
(၁) ပဋိသန္ဓေနေခြင်း, (၂) အိုခြင်း, (၃) နာခြင်း, (၄) သေခြင်း, (၅, ၆, ၇, ၈) အပါယ်လေးပါး။
နောက်တနည်း သံဝေဂ ၈-ပါး
သီလနှင့် သမာဓိကို အခြေခံရုံသာမက လောကကြီး၌
ငြီးငွေ့သော သံဝေဂဉာဏ် ထက်သန်လာအောင်
(၁) အမိဝမ်း၌ ဆယ်လညောင်းမျှ အောင်းခဲ့ရပုံ၊ လူ့ပြည်လူ့ရွာ၌
(၄) သေရပုံ၊ ထိုသို့သေရပြီးနောက်
(၅) လူအများစုက အပါယ်လေးပါးသို့ ရောက်ကြရပုံ၊
(၆) အတိတ်ဘဝများစွာတုန်းကလည်း ဤကဲ့သို့ ဝဋ်ဒုက္ခဘေးတွေနှင့် ကြုံခဲ့ရပုံ၊
(၇) အနာဂတ်ဘဝများစွာ၌လည်း နိဗ္ဗာန်မရမချင်း ဤကဲ့သို့ ဝဋ်ဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံလတံ့ဖြစ်ပုံ၊
(၈) ယခုဘဝဖြစ်ဆဲမှာလည်း (ဝတ်စားနေမှုအတွက်) အာဟာရ ရှာမှီးရခြင်းကြောင့် ဒုက္ခများပုံ ဤရှစ်ပါးကို အထပ်ထပ်မြင်ကာ လောကကြီး၌ ငြီးငွေ့မှုသံဝေဂကို ဖြစ်စေရသည်။
သံဝေဂဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်ရန် ဓမ္မအလင်္ကာ
အမိဝမ်းခေါင်း၊ ဆယ်လညောင်းမျှ၊ အောင်းခဲ့ရပေ၊
တည်သန္ဓေနှင့်၊ လူ့ပြေလူ့ရွာ၊ ရောက်ပြန်ပါလည်း၊
အိုနာသေရေး၊ ဒုက္ခဘေးကြောင့်၊ စိတ်အေးကိုယ်ခိုင်၊ မနေနိုင်ခဲ့၊
ဆိုင်ဆိုင်ဒုက္ခ၊ ခံပြီးမှလည်း၊ များလှပါယ်ရွာ၊ ရောက်ကြရှာ၏၊
အတီတာရှေး၊ ဤဝဋ်ဘေးနှင့်၊ နောင်ရေးနာဂတ်၊ ဒုက္ခထပ်လိမ့်၊
မပြတ်ခုခါ၊ ဖြစ်တုန်းမှာလည်း၊ အစာရှာရ၊ ထိုဒုက္ခကြောင့်၊
နေ့ညမဟူ၊ ကိုယ်စိတ်ပူ၍၊ သူသူငါငါ၊ မသက်သာသည်၊ . . .
(ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘာသာဋီကာ၊ ဝိပဿနာနိဒ္ဒေသ၊ ၅၉၇။)
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန် စံသောခါ သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ---
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာ၊ ချိန်အခါ၌၊ ဟောရာတရား၊
ဗြဟ္မာများနှင့်၊ နတ်ကားထွေပင်၊ ကျွတ်တန်းဝင်ဟု၊
ဆိုလျှင်စကား၊ ဘယ်ကျမ်းများ၊ ဟောထား ညွှန်ပါဘုရား?
မေး။ (ခ)သာသနာ ငါးထောင်ပြည့်လျှင် ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည်၊ တရားဟော၍ နတ်ဗြဟ္မာတွေ ကျွတ်တန်းဝင်ကြမည်ဆိုသည်မှာ ဘုရားဟောဖြစ်ပါသလား? ဘုရားဟော ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် မည်သူ့ကို အကြောင်းပြု၍ မည်သည့်နေရာတွင် ဟောခဲ့ကြောင်း သုတ္တန်ညွှန်ပြပေးစေလိုပါသည် ဘုရား။
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်နှင့်စပ် သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြေပါ
ဖြေ။ ။ (ခ) ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားဟော သုတ္တန်ပါဠိတော် တိုက်ရိုက် မလာရှိသော်လည်း ဒီဃနိကာယ် ပါထိကဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ သမ္ပသာဒနီယသုတ်စသည် သာသနအန္တရဟိတဝဏ္ဏနာ (သာသနာကွယ်ခြင်းအဖွင့်)၌
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်၊ ချိန်ခါတန်၊ မှတ်ရန် သာသနာကွယ်
“ အလုံးစုံသော ဓာတ်တော်တို့သည် မဟာဗောဓိပလ္လင်၌ စုကုန်၍ ရွှေတုံးကဲ့သုိ့ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်ကာ ရောင်ခြည်တော် ခြောက်သွယ်တို့ကို လွှတ်လတံ့၊ ထိုရောင်ခြည်တော်တို့သည် စကြာဝဠာတစ်သောင်းကို ပြန့်နှံ့သွား ကြလိမ့်မည်၊ ထိုပြန့်နှံ့သွားသောကြောင့် စကြာဝဠာတစ်သောင်းမှ နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် စည်းဝေးကြကုန်လျက် “ယနေ့ ဘုရားရှင်သည် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏၊ သာသနာတော်သည် ဆုတ်ယုတ်၏၊ ယခု ဤဖူးမြင်ရခြင်းသည် ငါတို့၏ နောက်ဆုံးဖြစ်သော ဖူးမြင်ရခြင်းပေတည်း”ဟု ဘုရားရှင် ခန္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာနေ့ထက် သာ၍ကြီးကျယ်သော ငိုကြွေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သော သနားဖွယ်ကို ပြုကြကုန်လိမ့်မည်၊ အနာဂါမ် ရဟန္တာတို့ကို ထား၍ ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိသဘောအားဖြင့် ကောင်းစွာ ဆောင်ထားခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုန်။
ဓာတ်တော်တို့၌ တေဇောဓာတ်ထ၍ ဗြဟ္မာ့ဘုံတိုင်အောင် ပျံတက်လိမ့်မည်၊ မုန်ညင်းစေ့ အတိုင်းအရှည်ရှိ ဓာတ်တော်သည်ပင် တစ်ခုသော မီးတောက်မီးလျှံ ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဓာတ်တော်တို့သည် ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်ကုန်လတ်သော် မီးတောက်မီးလျှံသည် ပြတ်စဲလိမ့်မည်၊ ဤသို့ ကြီးကျယ်သော အာနုဘော်ကို ပြပြီး၍ ဓာတ်တော်တို့သည် ကွယ်ကုန်ပြီးသော် သာသနာတော်သည် ကွယ်သည်မည်တော့၏”ဟု လာရှိသည်။
ပါထိကဝဂ္ဂဋီကာ၌ကား “ဓာတ်တော်တို့၏စုဝေးခြင်း, ရွှေတုံးကဲ့သို့ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်ခြင်း, ရောင်ခြည်တော်လွှတ်ခြင်းစသည်သည် ဘုရားရှင်၏ အဓိဋ္ဌာန်ကြောင့်သာ ဖြစ်၏- ဟု သိမှတ်အပ်၏”ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုသည်။
ဆိုလျှင်စကား၊ ကျမ်းဂန်ကား၊ ဟောထား မရှိပါ။
ထိုထိုအဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဖွင့်ငြား၊ ဆိုစကားက၊ ဘုရားပွင့်ဘိ၊ ဗောဓိခေါ်တွင်၊ ရွှေပလ္လင်၌၊ များဖျင်ဓာတု၊ ပေါင်းကာစုလျက်၊ ရွှေထုအလုံး၊ ပမာတုံးသို့၊ တစ်လုံးတစ်ခဲ၊ အံ့အဲဘနန်း၊ ဖြစ်ရပ်ဆန်းကား၊ ခြောက်တန်းရောင်ရည်၊ လွှတ်လိမ့်မည်ဟု၊ အတည်ထို့နောက်၊ တေဇောရောက်၍၊ မီးတောက်မီးလျှံ၊ အာကာပျံတက်၊ ဗြဟ္မာထက်ထိ၊ တိုင်ရောက်ဘိ၍၊ စွဲငြိတေဇော်၊ ဓာတ်တော်ခပ်သိမ်း၊ ချုပ်ပြတ်ငြိမ်းလျက်၊ ကွယ်ကိန်းသာသနာ၊ ချိန်အခါကို၊ ကျမ်းလာဖွေရှု၊ ဖော်ညွှန်းပြုက၊ ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန် မှတ်ဖွယ်ရန်ပါတကား။
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာနံ အနာဂတေ ဘဝိဿတိ။ သာသနဿ ကိရ သြက္ကနကာလေ ဣမသ္မိံ တမ္ဗပဏ္ဏိ ဒီပေ ဓာတုယော သန္နိပတိတွာ မဟာစေတိယံ ဂမိဿန္တိ။ မဟာစေတိယတော နာဂဒီပေ ရာဇာယန စေတိယံ။ တတော မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကံ ဂမိဿန္တိ။ နာဂဘဝနတောပိ ဒေဝလောကတောပိ ဗြဟ္မလောကတောပိ ဓာတုယော မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကမေဝ ဂမိဿန္တိ။ သာသပမတ္တာပိ ဓာတုယော န အန္တရာ နဿန္တိ။ သဗ္ဗဓာတုယော မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကေ ရာသိဘူတာ သုဝဏ္ဏက္ခန္ဓာ ဝိယ ဧကဂ္ဃနာ ဟုတွာ ဆဗ္ဗဏ္ဏရသ္မိယော ဝိဿဇ္ဇေဿန္တိ။
တာ ဒသသဟဿိလောကဓာတုံ ဖရိဿန္တိ၊ တတော ဒသသဟဿစက္ကဝါဠဒေဝတာ သန္နိပတိတွာ “အဇ္ဇ သတ္ထာ ပရိနိဗ္ဗာတိ၊ အဇ္ဇ သာသနံ သြသက္ကတိ၊ ပစ္ဆိမဒဿနံ ဒါနိ ဣဒံ အမှာက”န္တိ ဒသဗလဿ ပရိနိဗ္ဗုတဒိဝသတော မဟန္တတရံ ကာရုညံ ကရိဿန္တိ။ ဌပေတွာ အနာဂါမိခီဏာသဝေ အဝသေသာ သကဘာဝေန သန္ဓြွာရေတုံ န သက္ခိဿန္တိ။ ဓာတူသု တေဇောဓာတု ဥဋ္ဌဟိတွာ ယာဝ ဗြဟ္မလောကာ ဥဂ္ဂစ္ဆိဿတိ။ သာသပမတ္တာယပိ ဓာတုယာ သတိ ဧကဇာလာ ဘဝိဿတိ။ ဓာတူသု ပရိယာဒါနံ ဂတာသု ဥပစ္ဆိဇ္ဇိဿတိ။ ဧဝံ မဟန္တံ အာနုဘာဝံ ဒေဿတွာ ဓာတူသု အန္တရဟိတာသု သာသနံ အန္တရဟိတံ နာမ ဟောတိ။ (ဒီ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၊ ၈၃-၈၄။)
ဓာတူနံ သန္နိပါတနာဒိ ဗုဒ္ဓါနံ အဓိဋ္ဌာနေနေဝါတိ ဝေဒိတဗ္ဗံ။ (ဒီ၊ ဋီ၊ ၃၊ ၈၃။)
ဓာတုပရိနိဗ္ဗာနံ- ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်သည်၊ အနာဂတေ- နောင်အခါ၌၊ ဘဝိဿတိ-ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိရ-ချဲ့ဦးအံ့၊ သာသနဿ-၏၊ သြသက္ကနကာလေ- ဆုတ်နစ်ရာအခါ၌၊ ဣမသ္မိံ တမ္ဗပဏ္ဏိဒီပေ- ဤသီဟိုဠ်ကျွန်း၌၊ ဝါ-သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ၌၊ ဓာတုယော-ဓာတ်တော်တို့သည်၊ သန္နိပတိတွာ- စုဝေး၍၊ မဟာစေတိယံ- မဟာစေတီတော်သို့၊ ဂမိဿန္တိ- ကြွတော်မူကြလိမ့်မည်၊ မဟာစေတိယတော-မှ၊ နာဂဒီပေ- နာဂကျွန်း၌၊ ရာဇာယတနစေတိယံ- ရာဇာယတနစေတီ တော်သို့၊ (ဂမိဿန္တိ-မည်၊) တတော-ထိုစေတီမှ၊ မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကံ- မဟာဗောဓိပလ္လင်သို့၊ ဂမိဿန္တိ-မည်၊ နာဂဘဝနတောပိ- နဂါးဘုံမှလည်းကောင်း၊ ဒေဝလောကတောပိ-နတ်ပြည်မှလည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မလောကတောပိ- ဗြသ္မာ့ပြည်မှလည်းကောင်း၊ ဓာတုယော-တို့သည်၊ မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကမေဝ-သို့သာ၊ ဂမိဿန္တိ-မည်၊ သာသပ မတ္တာပိ- မုန်ညင်းစေ့အတိုင်းအရှည်ရှိသည်လည်း ဖြစ်သော၊ ဓာတု-ဓာတ်တော်သည်၊ အန္တရာ-မဟာဗောဓိသို့ မရောက်မီ အကြား၌၊ န နဿိဿတိ-ပျောက်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်၊ သဗ္ဗာ- အလုံးစုံကုန်သော၊ ဓာတုယော-တို့သည်၊ မဟာဗောဓိပလ္လင်္ကေ- မဟာဗောဓိပလ္လင်၌၊ ရာသိဘူတာ- အစုဖြစ်၍ ဖြစ်ကုန်သည်၊ (ဟုတွာ-၍၊) သုဝဏ္ဏက္ခန္ဓော ဝိယ-ရွှေတုံးကဲ့သို့၊ ဧကဂ္ဃနာ-တစ်ခဲနက်တို့သည်၊ ဝါ-တစ်လုံးတစ်ခဲတို့သည်၊ ဟုတွာ-၍၊ ဆဗ္ဗဏ္ဏရသ္မိယော- ခြောက်ပါးသောအဆင်းရှိသော ရောင်ခြည်တော်တို့ကို၊ ဝိဿဇ္ဇေဿန္တိ- လွှတ်တော်မူကြလိမ့်မည်။
တာ-ထိုရောင်ခြည်တော်တို့သည်၊ ဒသသဟဿိလောကဓာတုံ-တစ်သောင်းအတိုင်းအရှည်ရှိသော စကြာဝဠာကို၊ ဖရိဿန္တိ- ဖြန့်တော်မူကြလိမ့်မည်၊ တတော-ထိုသို့ ဖြန့်ခြင်းကြောင့်၊ ဝါ-ထိုမှနောက်၌၊ ဒသသဟဿ စက္ကဝါဠဒေဝတာ-တစ်သောင်းသောစကြာဝဠာ၌နေကြသော နတ်ဗြဟ္မာတို့သည်၊ သန္နိပတိတွာ-စည်းဝေး၍၊ “အဇ္ဇ-ယနေ့ (ယနေ့မှ)၊ သတ္ထာ- မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ပရိနိဗ္ဗာတိ-ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏၊ အဇ္ဇ-ယနေ့၊ သာသနံ- သာသနာတော်သည်၊ သြသက္ကတိ- ဆုတ်နစ်၏၊ ဒါနိ-ယခု၊ ဣဒံ- ဤဖူးမြင်ရခြင်းသည်၊ အမှာကံ- ငါတို့၏၊ ပစ္ဆိမဒဿန့-နောက်ဆုံးဖြစ်သော ဖူးမြင်ရခြင်းတည်း၊ ” ဣတိ- ဤသို့ပြောဆို၍၊ ဒသဗလဿ-မြတ်စွာဘုရား၏၊ ပရိနိဗ္ဗူတဒိဝသတော (ပရိနိဗ္ဗုတဒိဝသတော)-ခန္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာနေ့ထက်၊ မဟန္တတရံ- သာ၍ ကြီးကျယ်သော၊ ကာရုညံ-သနားဖွယ်ကို၊ ဝါ-ငိုကြွေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သော သနားဖွယ်ကို၊ ကရိဿန္တိ- ပြုကြလိမ့်မည်၊ အနာဂါမိခီဏာသဝေ- အနာဂါမ် ရဟန္တာတို့ကို ၊ ဌပေတွာ- ထား၍၊ အဝသေသာ- ကြွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၊ သကဘာဝေန- မိမိကိုယ်၏အဖြစ်ဖြင့်၊ ဝါ- မိမိသဘောအားဖြင့်၊ သန္ဓာရေတုံ- ကောင်းစွာ ဆောင်ထားခြင်းငှါ၊ န သက္ခိဿန္တိ- စွမ်းနိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်။
ဓာတူသု-ဓာတ်တော်တို့သည်၊ တေဇောဓာတု- တေဇောဓာတ်သည်၊ ဝါ-ဓာတ်လေးပါးအစုအဝေးဖြစ်သော ဓာတ်တော်အတွင်း၌ ပါဝင်သော တေဇောဓာတ်သည်၊ ဥဋ္ဌဟိတွာ-ထ၍၊ ယာဝ ဗြဟ္မလောကာ- ဗြဟ္မာ့ဘုံ တိုင်အောင်၊ ဥဂ္ဂစ္ဆိဿတိ- ပျံတက်လိမ့်မည်၊ သာသပမတ္တာယပိ- မုန်ညင်းစေ့အတိုင်းအရှည် ရှိသည်လည်းဖြစ်သော၊ ဓာတုယာ- ဓာတ်တော်သည်၊ သတိ- ရှိလသော်၊ ဧကဇာလာ-တစ်ခုတည်းသော မီးတောက်မီးလျှံရှိသည်၊ ဘဝိဿတိ- ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဓာတူသု-တို့သည်၊ ပရိယာဒါနံ- ကုန်ခန်းခြင်းသို့၊ ဂတာသု- ရောက်ကုန်လသော်၊ (ဇာလာ-မီးတောက်မီလျှံသည်)၊ ဥပစ္ဆိဇ္ဇိဿတိ- ပြတ်စဲလိမ့်မည်၊ ဧဝံ-သို့၊ မဟန္တံ-ကြီးကျယ်စွာသော၊ အာနုဘာဝံ- အာနုဘော်ကို၊ ဒေဿတွာ- ပြပြီး၍၊ ဓာတူသု-တို့သည်၊ အန္တရဟိတာသု- ကွယ်ပြီးကုန်လသော်၊ သာသနံ-သည်၊ အန္တရဟိတံ နာမ-ကွယ်သည်မည်သည်၊ ဟောတိ-ဖြစ်၏။ (သုတ်ပါထေယျဘာသာဋီကာ၊ ၁၊ ၃၄၅-၃၄၇။)
ဓာတူနံ သန္နိပါတနာဒိ- ဓာတ်တော်တို့၏ စုဝေးခြင်းစသည်သည်၊ ဗုဒ္ဓါနံ-ဘုရားရှင်တို့၏၊ အဓိဋ္ဌာနေနေဝ- အဓိဋ္ဌာန်၏အစွမ်းအားဖြင့်သာလျှင်၊ (ဟောတိ-၏၊) ဣတိ- ဤသို့၊ ဝေဒိတဗ္ဗံ- သိမှတ်အပ်၏။ (ဒီ၊ ဋီ၊ ၃၊ အနက်။)
ယာ ဧတ္ထ သမ္ပတ္တိ, သာ ဝိပတ္တိပရိယောသာနာ။ သဗ္ဗဥှိ ယောဗ္ဗနံ ဇရာပရိယောသာနံ, သဗ္ဗံ အာရောဂျံ ဗျာဓိပရိယောသာနံ, သဗ္ဗံ ဇီဝိတံ မရဏပရိယောသာနံ, သဗ္ဗော သမာဂမော ဝိယောဂပရိယောသာနော။ (ထေရဂါထာအဋ္ဌကထာ၊ ၂၊ ၂ဝ၁။)
သဗ္ဗံ အာရောဂျံ ဗျာဓိပရိယောသာနံ၊ သဗ္ဗံ ယောဗ္ဗနံ ဇရာပရိယောသာနံ၊ သဗ္ဗံ ဇီဝိတံ မရဏပရိယောသာနံ။ (သံယုတ်ဋီကာ၊ ၁၊ ၆၃။ ခုဒ္ဒသိက္ခာ-မူလသိက္ခာ ဋီကာ၊ ၂၂၂။)
သဗ္ဗံ အာရောဂျံ ဗျာဓိပရိယောသာနံ၊ သဗ္ဗံ ယောဗ္ဗနံ ဇရာပရိယောသာနံ၊ သဗ္ဗံ ဇီဝိတံ မရဏပရိယောသာနံ၊ သဗ္ဗောယေဝ လောကသန္နိဝါသော ဇာတိယာ အနုဂတော, ဇရာယ အနုသဋော, ဗျာဓိနာ အဘိဘူတော, မရဏေန အဗ္ဘာဟတော။ (ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၊ ၁၊ ၂၂၅။)
ပြည့်စုံခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းလျှင် အဆုံးရှိ၏၊ အနာရောဂါကင်းခြင်း ကျန်းမာခြင်းဟူသမျှသည် နာခြင်း မကျန်းမာခြင်းလျှင် အဆုံးရှိ၏၊ ပျိုမျစ်နုနယ် အရွယ်ကောင်းခြင်းဟူသမျှသည် အိုခြင်း ရင့်ရော်ခြင်းလျှင် အဆုံးရှိ၏၊ အသက်ရှင်ခြင်းဟူသမျှသည် သေခြင်းလျှင် အဆုံးရှိ၏၊ ပေါင်းဆုံခြင်းဟူသမျှသည် ကွေကွင်းခြင်းလျှင် အဆုံးရှိ၏။ အလုံးစုံသော သတ္တဝါအပေါင်းကို ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းက အစဉ်လိုက်လာ၏၊ အိုခြင်းက ပူးဝင်လာ၏၊ နာခြင်းက လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်၏၊ သေခြင်းက ပြင်းစွာပုတ်ခတ် ရိုက်သတ်လျက်ရှိ၏။
(၁) နုနယ်ရုပ်ဆင်း၊ ပျိုမျစ်ခြင်းကား၊ အိုခြင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၂) ရောဂါကင်းရှင်း၊ ကျန်းမာခြင်းကား၊ နာခြင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၃) ဇီဝိန်တင်းလင်း၊ သက်ရှည်ခြင်းကား၊ သေခြင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၄) ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံခြင်းကား၊ ကွေကွင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၅) ခြွေရံသင်းပင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းကား၊ ယိုယွင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၆) စည်းစိမ်ပြည့်တင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကား၊ မွဲခြင်းနောက်ဆုံးပါတကား။
(၇) တက်ကြွားကြွကြွ၊ မောက်လွန်းကလည်း၊ လျှောကျနောက်ဆုံးပါတကား။
လောက၌ ပြည့်စုံမှု စည်းစိမ်ဟူသမျှသည် ပျက်စီးမှု ဝိပတ္တိသာ အဆုံးရှိ၏၊ အနာကင်းခြင်းသည် (တကင်းထဲ ကင်း၍မနေ) အနာရောဂါဖြစ်ခြင်းသာ အဆုံးရှိ၏၊ နောက်ဆုံး သေခါနီးမှာ မည်သူမဆို ရောဂါဖြစ်၏၊ အရွယ်ပျိုခြင်းသည် (တပျိုထဲ ပျို၍မနေ) အိုခြင်းသာ အဆုံးရှိ၏၊ အသက်ရှင်ခြင်းသည် (တရှင်ထဲ ရှင်၍မနေ) သေခြင်းသာ အဆုံးရှိ၏။ ဤသို့လျှင် “သမ္ပတ္တိ ဟူသမျှသည် ဝိပတ္တိသာ အဆုံးရှိ၏-ဟု နှလုံးသွင်းမှုသည် သမ္ပတ္တိ၏ ဝိပတ္တိအားဖြင့် မရဏကို အမှတ်ရနေခြင်းတည်း။ (ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘာသာဋီကာ၊ စတုရာရက္ခနိဒ္ဒေသ၊ ၅၉၁။)
အန္တောဝဿသတံ သဗ္ဗေ၊ လောကေ သကမ္မနိဿိတာ။
မရဏံ ဝေ ဂမိဿန္တိ၊ ဇာတာနံ ဟိ မတံ ဓုဝံ။
လောကေ-မျက်မြင်တွေ့ရ, လူ့လောက၌၊ သကမ္မနိဿိတာ-စားရေး ဝတ်ရေး, နေရေးထိုင်ရေးဟု, ကိုယ့်ရေးတွေရှုပ်, ကိုယ့်အလုပ်ကို မှီကြကုန်သော၊ သဗ္ဗေ-ရဟန်း ရှင် လူ, ခပ်သိမ်းသူတို့သည်၊ အန္တောဝဿ-သတံ-တနေ့တရက်, တနံနက်ဟု, အသက်ကုန်ဆင်း, အနှစ်တရာအတွင်း၌၊ ဝေ (ဧကန္တေန)-စင်စစ်ဧကန်, အမှန်မလွဲ, တပုံစံထဲသာလျှင်၊ မရဏံ ဂမိဿန္တိ-သေတွင်းသေဝ, သေပေါက်ကျအောင်, ရောက်ရကုန်လတံ့၊ ဟိ (သစ္စံ)-သူတော်အများ, လက်ကိုင်ထား၍, စကားဆိုဟန်, အမှန်ပင် ဖြစ်ပါပေ၏၊ ဇာတာနံ-ရှေးကံအရ, တဘဝ၌, ဖြစ်ကြရသူ, အများလူတို့၏၊ မတံ-အသက်တမ်းနှင့်, ကံစွမ်းအရှိန်, ကုန်ချိန်ရောက်က, သေပျောက်ရခြင်းသည်၊ ဓုဝံ-မြေလက်ခတ်နဲ, မြှောက်သည့်ခဲသို့, မလွဲမသွေ, အမြဲပင် ဖြစ်ပေသတည်း။
အဇ္ဇေဝ ကိစ္စံ အာတပ္ပံ၊ ကော ဇညာ မရဏံ သုဝေ။
အဇ္ဇေဝ-နက်ဖန် မရွှေ့, ယခုနေ့၌ပင်၊ အာတပ္ပံ-ကိလေသာအမှိုက်, မီးဖြင့်တိုက်သို့, လောင်မြိုက်ဖို့ရန်, အဖန်ဖန် အားထုတ်မှုကို၊ ကိစ္စံ ကာတဗ္ဗံ-မနားမနေ, ပြုသင့်ပေ၏၊ သုဝေ-ယနေ့မှထောက်, နက်ဖန်ရောက်မှ၊ မရဏံ-သေရမည်ကို၊ ကော-အဘယ်သူသည်၊ ဇညာ-ကောင်းစွာပိုင်ပိုင်, သိနိုင်ပါအံ့နည်း? ဟိ (ယုတ္တံ)-ထိုကဲ့သို့သာ, အခါခါဖြင့်, မှန်စွာပုံသေ, တွေးသင့်ပေ၏၊ မဟာသေနေန-တွင်းပနှစ်တန်, ရောဂါဒဏ်ဖြင့်, ဘေးရန်ပတ်လည်, များသောစစ်သည်ရှိသော၊ တေန မစ္စုနာ-ထိုသေမင်းနှင့်၊ သင်္ဂရံ-ကိုယ်ကသာအောင်, ညှာတာအောင်ဟု, လက်ဆောင်ချော့မြှူ, တိုက်၍ယူခြင်းသည်၊ န နော အတ္ထိ (နတ္ထိ ဧဝ)-မရှိဧကန်, အမှန်ပင် ဖြစ်ပေတော့သတည်း။
ငါနှင့်ရွယ်တူ၊ ငါ့အောက်လူ၊ ကြီးသူသေကြ များလှပြီ။
ခဏမစဲ၊ အိုစမြဲ၊ ကိုယ်လဲ သေဖက် နီးခဲ့ပြီ။
မသေရမီ၊ ပါရမီ၊ ငါသည် ဖြည့်မှ သင့်တော့မည်။
ရေ၌ ဒုတ်ရေး၊ တူတွေးရေပွက်၊ တောက်ထက်မြစ်တူ၊ အားရှိသူထွေး၊ တံတွေးသားတစ်၊ သံအိုးခြစ်၌၊ ချပစ်အလား၊ သတ်မည့်နွားနှင့်၊ မြက်ဖျားမှာနှင်း၊ ပုံမယွင်းခဲ့၊ နီးမင်းအာယု၊ ကောင်းသည့်မှုကို၊ ပြုသင့်လက်ငင်း ခုချက်ချင်း။ (ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘာသာဋီကာ၊ စတုရာရက္ခနိဒ္ဒေသ၊ ၅၉၄-၅၉၅။)
ငါးထောင်ဆိုသည့် သာသနာ မည်သည့်ကျမ်းကလာ---?
မြန်မာပြည်, မရမ်းကုန်း, ဦးသောင်းညွန့် (ယောဂီ)၏ လျှောက်ထားသော မေးခွန်းများမှာ—
သာသနာငါးထောင်၊ ကျမ်းကိုးဆောင်၊ သိအောင် ညွှန်းပါဘုရား။
မေး။ ။ (က) အရှင်ဘုရား, ဘုရားသာသနာ ငါးထောင်ရှိသည်၊ ထိုစကားသည် ဘုရားဟော ဖြစ်ပါသလားဘုရား?
သာသနာငါးထောင်၊ ကျမ်းစောင်စောင်၊ ထုတ်ဆောင်ပြပါမည်။
ဖြေ။ ။ (က) ဘုရားသာသနာ ငါးထောင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားဟော တိုက်ရိုက် မလာရှိသော်လည်း ရှင်အာနန္ဒာမထေရ်က မိထွေးတော် ဂေါတမီ ရဟန်းပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားရာတွင် ဘုရားရှင်က “အာနန္ဒာ, လယ်သမားသည် တစ်ဖက်ဆည်ကန်ကြီး၌ ကြိုတင်၍ ကြီးစွာသော ကန်သင်းကန်ဘောင်တို့ကို ဆည်ဖို့ဖွဲ့ယှက် ခိုင်လုံစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိပါမူ ရေတို့သည် မယိုမထွက် အလိုရှိတိုင်း ရှည်ကြာလေးမြင့်သောကာလပတ်လုံး သုံးဆောင်ရသကဲ့သို့ထို့အတူ ငါဘုရားသည် မဆွကပင် ကြိုတင်လျက် ဘိက္ခုနီတို့အား ဂရုဓမ် ရှစ်ပါးကို အသက်ထက်ဆုံး စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ပညတ်တော်မူရကား ငါဘုရား၏ပညတ်တော်တည်းဟူသော ဓမ္မဝိနယ သဒ္ဓမ္မ (သာသနာ)သည် အနှစ်တစ်ထောင် တည်လတံ့ဟု—
“သေယျထာပိ အာနန္ဒ ပုရိသော မဟတော တဠာကဿ ပဋိကစ္စေဝ အာဠိံ ဗန္ဓေယျ ယာဝဒေဝ ဥဒကဿ အနတိက္ကမနာယ၊ ဧဝမေဝ ခေါ အာနန္ဒ မယာ ပဋိကစ္စေဝ ဘိက္ခုနီနံ အဋ္ဌ ဂရုဓမ္မာ ပညတ္တာ ယာဝဇီဝံ အနတိက္ကမနီယာ”တိ။ (စူဠဝဂ္ဂပါဠိ၊ ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓက၊ ၄၄၇။)
[အာနန္ဒ- အာနန္ဒာ၊ သေယျထာပိ- ဥပမာပုံဆို ဘယ်လိုနည်းဟူမူကား၊ ပုရိသော- သည်၊ မဟတော-ကြီးစွာသော၊ တဠာကဿ- တစ်ဖက်ဆည်ကန်၏၊ အာဠိံ- ကန်ဘောင်ကန်ရိုးကို၊ ဥဒကဿ- ရေ၏၊ ယာဝ အနတိက္ကမနာယ ဧဝ- မကျော်လွန်နိုင်ခြင်း တိုင်အောင်သော အကျိုးငှါသာ၊ ပဋိကစ္စေဝ- စောစောကပင်၊ ဗန္ဓေယျ သေယျထာပိ- ဖွဲ့ရာသကဲ့သို့၊ အာနန္ဒ- အာနန္ဒာ၊ ဧဝမေဝ- ဤအတူသာလျှင်၊ မယာ- ငါသည်၊ ပဋိကစ္စေဝ- ကြိုတင်၍သာလျှင်၊ ဘိက္ခုနီနံ- တို့အား၊ အဋ္ဌ ဂရုဓမ္မာ- ဂရုဓမ်တရား ရှစ်ပါးတို့ကို၊ ပညတ္တာ- ပညတ်အပ်ကုန်ပြီ၊ ယာဝဇီဝံ- အသက်ထက်ဆုံး၊ အနတိက္ကမနီယာ- မလွန်ကျူးအပ်, မလွန်ကျူးထိုက်ကုန်၊ ဣတိ- ဤသို့ မိန့်တော်မူပြီ။]
မဟတော တဠာကဿ ပဋိကစ္စေဝ အာဠိန္တိ ဣမိနာ ပန ဧတမတ္ထံ ဒေဿတိ— ယထာ မဟတော တဠာကဿ အာဠိယာ အဗဒ္ဓါယပိ ကိဉ္စိ ဥဒကံ တိဋ္ဌေယျ၊ ပဌမမေဝ ဗဒ္ဓါယ ပန ယံ အဗဒ္ဓပစ္စယာ န တိဋ္ဌေယျ၊ တမ္ပိ တိဋ္ဌေယျ၊ ဧဝမေဝ ယေ ဣမေ အနုပ္ပန္နေ ဝတ္ထုသ္မိံ ပဋိကစ္စေဝ အဝီတိက္ကမနတ္ထာယ ဂရုဓမ္မာ ပညတ္တာ၊ တေသု အပညတ္တေသုပိ မာတုဂါမဿ ပဗ္ဗဇိတတ္တာ ပဉ္စေဝ ဝဿသတာနိ သဒ္ဓမ္မော တိဋ္ဌေယျ။ ပဋိကစ္စေဝ ပညတ္တတ္တာ ပန အပရာနိပိ ပဉ္စဝဿသတာနိ ဌဿတီတိ ဧဝံ ပဌမံ ဝုတ္တံ ဝဿသဟဿမေဝ ဌဿတီတိ။ (စူဠဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ၊ ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓြွက၊ ၁၂၇။)
[ ပန- ဆက်ဦးအံ့၊ မဟတော တဠာကဿ ပဋိကစ္စေဝ အာဠိန္တိ ဣမိနာ- မဟတော တဠာကဿ ပဋိကစ္စေဝ အာဠိံ ဟူသော ဤပါဌ်ဖြင့်၊ ဧတမတ္ထံ- ဤအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို၊ ဒေဿတိ- ပြတော်မူ၏၊ မဟတော- ကြီးစွာသော၊ တဠာကဿ- တစ်ဖက်ဆည်ကန်၏၊ အာဠိယာ- ကန်ပေါင် ကန်ရိုးကို၊ အဗဒ္ဓါယပိ- မဖွဲ့အပ်ပါသော်လည်း၊ (မဖွဲ့အပ်စေကာမူ၊) ကိဉ္စိ ဥဒကံ- အနည်းငယ်သော ရေသည်၊ (ရေအနည်းငယ်သည်၊) တိဋ္ဌေယထ ယထာ- တည်ရာသကဲ့သို့၊ ပန- ဆက်ဦးအံ့၊ ပဌမမေဝ- စောစောကပင်၊ (အာဠိယာ-ကို၊) ဗဒ္ဓါယ-ဖွဲ့အပ်သော်၊ ယံ- အကြင်ရေသည်၊ (အနည်းငယ်သောရေမှတပါး များစွာသောရေသည်၊) အဗဒ္ဓပစ္စယာ- မဖွဲ့ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်၊ န တိဋ္ဌေယျ- မတည်ရာ၊ တမ္ပိ- ထိုရေသည်လည်း၊ တိဋ္ဌေယျ ယထာ- (စောစောကပင် ကန်ပေါင် ကန်ရိုးကို ဖွဲ့အပ်သောကြောင့်) တည်ရာသကဲ့သို့၊ ဧဝမေဝ- ဤအတူသာလျှင်၊ ဝတ္ထုသ္မိံ- အကြောင်းဝတ္ထုသည်၊ အနုပ္ပန္နေ- မဖြစ်ပေါ်သေးမီ၊ ပဋိကစ္စေဝ- စောစောကပင်၊ (ကြိုတင်၍၊) အဝီတိက္ကမနတ္ထာယ- မကျော်လွန်ခြင်းအကျိုးငှါ၊ ယေ ဣမေ ဂရုဓမ္မာ- အကြင်ဂရုဓမ်တို့ကို၊ ပညတ္တာ-ပညတ်တော်မူအပ်ကုန်ပြီ၊ တေသု- ထိုဂရုဓမ်တို့ကို၊ အပညတ္တေသုပိ- မပညတ်အပ် ပါကုန်သော်လည်း၊ (မပညတ်အပ်ပါကုန်မူကား၊) မာတုဂါမဿ- မာတုဂါမ၏၊ ပဗ္ဗဇိတတ္တာ- ရဟန်းအဖြစ်သို့ ကပ်ရောက်သည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ ပဉ္စေဝ ဝဿသတာနိ- အနှစ်ငါးရာတို့ပတ်လုံးသာ၊ သဒ္ဓမ္မော- သူတော်ကောင်း တရားသည်၊ တိဋ္ဌေယျ-တည်ရာ၏၊ ပန- ဆက်ဦးအံ့၊ ပဋိကစ္စေဝ- စောစောကပင်၊ ပညတ္တတ္တာ- ပညတ်တော်မူအပ်သည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ အပရာနိပိ- အခြားလည်း ဖြစ်ကုန်သော၊ ပဉ္စဝဿသတာနိ- အနှစ်ငါးရာတို့ပတ်လုံး၊ ဌဿတိ- တည်ဦးတော့လတံ့၊ ဣတိ ဧဝံ- ဤသို့လျှင်၊ ပဌမံ- ရှေးဦးစွာ၊ ဝုတ္တံ- ဟောတော်မူအပ်သော၊ ဝဿသဟဿ မေဝ- အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးသာ၊ ဌဿတိ- တည်လတံ့၊ ဣတိ- ဤအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို၊ (ဒေဿတိ- ပြတော်မူ၏။) (စူဠဝဂ္ဂဘာသာဋီကာ၊ ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓက အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ၊ ၄၃၆-၄၃၇။)]
မှတ်ချက်။ ။ မာတုဂါမများ ရဟန်းပြုလာသည့်အတွက် နဂိုတည်စရာရှိသော အနှစ်တစ်ထောင်မှ တစ်ဝက်လျော့၍ ငါးရာသာ တည်တော့ရာ၏၊ သို့သော် ဂရုဓမ်ကို ကြိုတင်၍ ပညတ်တော်မူလိုက်သည့်အတွက် ငါးရာမလျော့တော့ဘဲ “သစေ အာနန္ဒ ၊ ပ ၊ ဝဿသဟဿံ သဒ္ဓမ္မော တိဋ္ဌေယျ (ဝိ၊ ၄၊ ၄၄၆)”ဟု ပဌမမိန့်တော်မူအပ်သော အနှစ်တစ်ထောင်အတိုင်းပင် တည်ပါလိမ့်မည်- ဟု ဆိုလိုသည်။
သာသနာ ၅-ထောင် ကျမ်းစောင်စောင်
စူဠဝါအဋ္ဌကထာနှင့် အင်္ဂုတ္တိုရ် အဋ္ဌကနိပါတအဋ္ဌကထာတို့လာ
ရှင်အာနန္ဒာအား ဟောကြားတောမူသော ဘုရားရှင်၏အလိုတော်ကို သိတော်မူသော အဋ္ဌကထာ ဆရာသည် စူဠဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓကအဖွင့်၌ အနှစ်တစ်ထောင်ဟူသည် (၁) ပဋိသမ္ဘိဒါပဘေဒပတ္တရဟန္တာခေတ်ကိုသာ ရည်၍ ဟောတော်မူသည်။ ထိုထက်အလွန် (၂) သုက္ခဝိဿကရဟန္တာခေတ် တစ်ထောင်, (၃) အနာဂါမ်ခေတ် တစ်ထောင်, (၄) သကဒါဂါမ်ခေတ် တစ်ထောင်, (၅) သောတာပန်ခေတ် တစ်ထောင် အားဖြင့် သာသနာတော် ငါးထောင် တည်လတံ့ဟု—
ဝဿသဟဿန္တိ စေတံ ပဋိသမ္ဘိဒါပဘေဒပ္ပတ္တခီဏာဝသဝသေနေဝ ဝုတ္တံ။ တတော ပန ဥတ္တရိပိ သုက္ခဝိပဿကခီဏာသဝဝသေန ဝဿသဟဿံ, အနာဂါမိဝသေန ဝဿသဟဿံ, သကဒါဂါမိဝသေန ဝဿသဟဿံ, သောတာပန္နဝသေန ဝဿသဟဿန္တိ ဧဝံ ပဉ္စဝဿသဟဿာနိ ပဋိဝေဓသဒွမ္မော ဌဿတိ။ ပရိပတ္တိဓမ္မောပိ တာနိယေဝ။ (စူဠဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ၊ ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓက၊ ၁၂၇။)
အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဋ္ဌကနိပါတအဋ္ဌကထာ ဂေါတမီဝဂ် ဂေါတမီသုတ်အဖွင့် (အံ ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၊ ၂၃၈)၌လည်း အလားတူပင် ဖွင့်ဆို၏။
ပါထိကဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာလာ သာသနာ ၅-ထောင်
ဒီဃနိကာယ် ပါထိကဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ သမ္ပသာဒနီယသုတ် သာသနာကွယ်ပုံအဖွင့်၌
(၁) ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာခေတ် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ၊
(၂) ဆဠာဘိညရဟန္တာခေတ် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ၊
(၃) တေဝိဇ္ဇရဟန္တာခေတ် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ၊
(၄) သုက္ခဝိပဿကရဟန္တာခေတ် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ၊
(၅) ပါတိမောက္ခရဟန်းခေတ် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ၊ ဟု ရှိ၏။
ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တေဟိ ဝဿသဟဿံ အဋ္ဌာသိ။ ဆဠာဘိညေဟိ ဝဿသဟဿံ။ တေဝိဇ္ဇေဟိ ဝဿသဟဿံ။ သုက္ခဝိပဿကေဟိ ဝဿသဟဿံ။ ပါတိမောက္ခေဟိ ဝဿသဟဿံ အဋ္ဌာသိ။ (ဒီ၊ ဋ္ဌ၊ ၃၊ ၈၃။)
အင်္ဂုတ္တိုရ် ဧကကနိပါတအဋ္ဌကထာလာ သာသနာ ၅-ထောင်
ထို့ပြင် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် ဧကကနိပါတအဋ္ဌကထာ ဒုတိယပမာဒါဒိဝဂ္ဂအဖွင့်၌ကား —
(၂) ထို့နောက် ဆဠာဘိညရဟန္တာခေတ်၊
(၃) ထို့နောက် တေဝိဇ္ဇရဟန္တာခေတ်၊
(၄) ထို့နောက် သုက္ခဝိပဿကရဟန္တာခေတ်၊
(၅) ထို့နောက် အနာဂါမ်, သကဒါဂါမ်, သောတာပန်– ဟု လာရှိ၏။
ဗုဒ္ဓါနံ ဟိ ပရိနိဗ္ဗာနတော ဝဿသဟဿမေဝ ပဋိသမ္ဘိဒါ နိဗ္ဗတ္တေတုံ သက္ကောန္တိ၊ တတော ပရံ ဆ အဘိညာ၊ တတော တာပိ နိဗ္ဗတ္တေတုံ အသက္ကောန္တာ တိေဿာ ဝိဇ္ဇာ နိဗ္ဗတ္တေန္တိ။ ဂစ္ဆန္တေ ဂစ္ဆန္တေ ကာလေ တာပိ နိဗ္ဗတ္တေတုံ အသက္ကောန္တာ သုက္ခဝိဿကာ ဟောန္တိ။ ဧတေနေဝ ဥပါယေန အနာဂါမိနော သကဒါဂါမိနော သောတာပန္နာတိ။ (အံ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၆၇။)
ပါရာဇိကကဏ္ဍအဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပဌမသင်္ဂီတိကထာ၌လည်း—
ပဌမသံဂါယနာတင်ပြီးဆုံးသောကာလဝယ် “မဟာကဿပမထေရ်သည် ဘုရားရှင်၏ ဤသာသနာတော်ကို အနှစ် ၅ထောင် ရှည်ကြာသည့်ကာလပတ်လုံး တည်ရှိအောင် စွမ်းနိုင်သည်ကို ပြုအပ်ပေပြီ”ဟု ကောင်းချီးပေးသကဲ့သောအနေဖြင့် ဤမြေကြီးသည် အကြိမ်များစွာ လှုပ်ခဲ့လေသည်-ဟု လာရှိ၏။
သင်္ဂီတိပရိယောသာနေ စဿ “ဣဒံ မဟာကဿပတ္ထေရေန ဒသဗလဿ သာသနံ ပဉ္စဝဿ သဟဿပရိမာဏံ ကာလံ ပဝတ္တနသမတ္ထံ ကတ”န္တိ သဉ္စာတပ္ပမောဒါ သာဓုကာရံ ဝိယ ဒဒမာနာ အယံ မဟာပထဝီ ဥဒကပရိယန္တံ ကတွာ အနေကပ္ပကာရံ ကမ္ပိ သင်္ကမ္ပိ သမ္ပကမ္ပိ သမ္ပဝေဓိ၊ အနေကာနိ စ အစ္ဆရိယာနိ ပါတုရဟေသုန္တိ အယံ ပဌမသင်္ဂီတိ နာမ။ (ဝိ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၃။)
စ- ဆက်၍ဆိုဦးအံ့၊ အဿ- ထိုဘုရားစကားတော်ကို၊ သင်္ဂီတိပရိယောသာနေ- သံဂါယနာတင်ခြင်း၏ အဆုံး၌၊ မဟာကဿပတ္ထေရေန-မဟာကဿပမထေရ်သည်၊ ဒသဗလဿ-မြတ်စွာဘုရား၏၊ ဣဒံ သာသနံ- ဤသာသနာတော်ကို၊ ပဉ္စဝဿသဟဿပရမာဏံ- အနှစ် ၅ထောင်အတိုင်းအရှည်ရှိသော၊ ကာလံ- ကာလပတ်လုံး၊ ပဝတ္တနသမတ္ထံ- ဖြစ်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်သည်ကို၊ ကတံ- ပြုအပ်ပါပေပြီ၊ ဣတိ- ဤသို့၊ သဉ္စာတပ္ပမောဒါ- လွန်စွာဖြစ်သော ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်၊ (ဟုတွာ-၍၊) သာဓုကာရံ- သာဓု ဟု ပြုအပ်သော အသံကို၊ ဝါ- ကောင်းချီးသံကို၊ ဒဒမာနာ-မပေးသော်လည်း ပေးသကဲ့သို့၊ အယံ မဟာပထဝီ- ဤမြေကြီးသည်၊ ဥဒကပရိယန္တံ- ရေအဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသည်ကို၊ ကတွာ-ပြု၍၊ အနေကပ္ပကာရံ- တစ်ပါးမက များသောအပြားအားဖြင့်၊ ဝါ- ကြိမ်ဖန်များစွာ၊ ကမ္ပိ- တုန်လှုပ်ပြီ၊ သင်္ကမ္ပိ- အထက်အထက်သို့ တက်ကာတက်ကာ ပြင်းစွာ တုန်လှုပ်ပြီ၊ သမ္ပကမ္ပိ- အထက် အောက် နိမ့်တုံမြင့်တုံ အပြားအားဖြင့် ပြင်းစွာ တုန်လှုပ်ပြီ၊ သမ္ပဝေဓိ- အရပ်လေးမျက်နှာ ယိမ်းထိုး၍ အမျိုးမျိုး အပြားအားဖြင့် ပြင်းစွာတုန်လှုပ်ပြီ၊ အနေကာနိ- တစ်ပါးမက များစွာကုန်သော၊ အစ္ဆရိယာနိ စ-ပန်းမိုးရွာခြင်း, အဝတ်မြှောက်ခြင်း အစရှိသော အံ့ဘွယ်တို့သည်လည်း၊ ပါတုရဟေသုံ- ထင်ရှားဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ဣတိ အယံ- ဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသည်ကား၊ ပဌမမဟာသင်္ဂီတိ နာမ- ပဌမမဟာသံဂါယနာတင်ခြင်း မည်၏။ (ပါရာဇိကဏ်ဘာသာဋီကာ၊ ၁၊ ၁၈၉-၁၉ဝ။)
ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ နိဒါနကထာ ပဌမသင်္ဂီတိကထာ (ဒီ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၆)နှင့် အဋ္ဌသာလိနီအဋ္ဌကထာ နိဒါနကထာ (အဘိ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၈)တို့၌လည်း “ပဉ္စဝဿသဟဿပရိမာဏကာလံ”ဟု သမာသ် ပုဒ်ဖြစ်တာသာ ထူး၏။
သာသနာ ၅ထောင်နှင့်ပတ်သက်၍ “ပိဋကတော်နှင့်စပ် မှတ်စုထွေလာ သိကောင်းစရာ” စာအုပ် (၈၂၁-၈၂၂)၌ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓဟောချက်၊ စကားမြွက်၊ ယူလျက် ဖွင့်ကြသည်။
တိုက်ရိုက်ဟောကြား၊ မြတ်စကား၊ ထင်ရှားမရှိပြီ။
Half Moon Bay CA 94019 USA
ပြည်တွင်းပြည်ပ မဟာစည် နာယကဆရာတော်ဘုရား
၂၄-ပါး အပေါင်းထားသည့် သုံးပါးဂုဏ်တော် ဖွင့်ဆိုသော်…?
ဒေါ်သန်းနွဲ့ (စက်မှု၊ ၁) တောင်သာရဲ့ လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ--- ရတနာသုံးစုံ၊ မြတ်သည့်ဂုဏ်၊ အကုန်သိလိုပါ၊ နက်အဓိပ္ပါယ်၊ ဖွင့်အကျယ...
ထွက်လေ၀င်လေ မရှိသူ ထက်ထက်အောင်,ကိုမူ...?
မကေသီ (Katherine Chen), 935 Higate Dr., Daly City, CA 94015 လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ- မေး။ ။ အရှင်ဘုရား ထွက်လေ ဝင်လေ၊ မရှိ...
သေပြီးခန္ဓာ မပုပ်တာ သိချင်လွန်းလို့ပါ
ဦးထွန်းရွှေ (ခရမ်းခြံရွာ) တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲ့ လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ- စူဠသောတာ၊ သေသောခါ၊ ခန္ဓာမပုပ်သိုး၊ ချို့သ...
မဲ စာရေးတံ သိချင်ပြန် ပြောပြပေးရန် ခွင့်တောင်းပန်
ဒေါ်ကျင်မွှေး (Daly City) လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ--- စာရေးတံမဲ၊ ဓိပ္ပါယ်လဲ၊ သိတွဲပေးတော်မူ။ (ဃ) စာရေးတံမဲ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြေ...
လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ တကယ်ဟုတ်,မဟုတ် ဖြေဆိုပုံ
တပည့် ခင်ခင်ဟန် (Daly City) လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ--- မေး။ ။ ဆရာတော်ဘုရား--- လေးဆူဘုရား၊ ဓာတ်တော်များ၊ သွင်းထား ဌာပနာ၊ ...
သြဝါဒပါတိမောက် ပါဠိတော် ၃-ဂါထာ
သြဝါဒပါတိမောက် ပါဠိတော် ၃-ဂါထာ ခန္တီ ပရမံ တပေါ တိတိက္ခာ၊ နိဗ္ဗာနံ ပရမံ ဝဒန္တိ ဗုဒ္ဓါ။ န ဟိ ပဗ္ဗဇိတော ပရူပဃာတီ၊ န သမဏော ဟောတိ ပရံ ဝိဟေဌ...
မည်သည့်ပရိတ္တာ ဘယ်ချိန်ခါ ရွတ်ဆိုကြရမှာ...?
ဒေါ်ကျင်မွှေး (Daly City) လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ--- ပရိတ် ၁၁-သုတ်မှ၊ ဘယ်သုတ်က၊ စ၍ ရွတ်မည်နည်း? နတ်ပင့် နတ်ပို့၊ ရွတ်ဆိုဖို့၊ ဘ...
သရဏဂုံအကျိုး သရဏဂုံ ပုတီးစိပ်ခြင်းအကျိုး ၁။ သရဏဂုံ၊ သုံးပါးစုံ၊ ကြည်ယုံ ပုတီးစိပ်။ ၂။ သရဏဂုံ၊ ကိုယ်လုံးထုံ၊ ပြည့်စုံ သိဒ္ဓိဟိတ်။ ၃...
နောင်တ ၁ဝ-မျိုး (၁) ငယ်ရွယ်စဉ် ဥစ္စာကို မရှာမိခဲ့-ဟု အိုသောအခါ နောင်တရခြင်း။ (၂) ငယ်ရွယ်စဉ် အတတ်ပညာကို မသင်မိခဲ့-ဟု အိုသောအခါ နောင်တရြ...
သင်္ကန်းအလှူ နှစ်ခုမူ၊ ကထိန်,၀ါဆို တူ,မတူ
မကေသီ (Katherine Chen), 935 Higate Dr., Daly City, CA 94015 လျှောက်ထားသော မေးခွန်းမှာ- မေး။ ။ အရှင်ဘုရား--- ဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ထိ...
BHIKKHU JOTA LANKARA
မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ဂျပန်သာ
Myanmar Sutta မြန်မာသုတ္တန်
အမေး အဖြေ (86)